pixel 4 vashandisi vanotambura nekudzima skrini mushure meazvino android 11 beta kugadzirisa
Kuru Nhau & Ongororo Vashandisi vePixel 4 vanotambura nekudzima skrini mushure meazvino Android 11 beta kugadzirisa
Kwayedza svondo rino Google yakadonhedza Android 11 beta 2. Kunyangwe ichi chiri chikamu cheiyo Android yeruzhinji beta chirongwa, isu tinokuyambira iwe nguva dzese kuti usaise beta software pane yako yezuva mutyairi nekuda kwekugona kwembugs. Icho chinhu & chimwe chinhu chekuisa yakasarudzika Pixel 2 uye nyowani yekuunganidza guruva mudhirowa, iyo & apos; imwezve kuve nePixel 2 kana nyowani yaunovimba nayo kuti ugare uchitaurirana nemhuri yako, mukuru wako kana vatengi.
Heano & apos; s muenzaniso wakanaka we zvinogona kuitika. Vazhinji maPixel 4 varidzi vakanyunyuta paReddit nezve bug inokonzeresa kuti skrini pafoni yavo itadze. Kutanga, isu tinofanirwa kuratidza kuti iyo yekuvandudza yakabvisa chinhu chakabvumidza vashandisi vePixel 4 kumanikidza iyo 90Hz yekuvandudza mwero kuti irambe ichigoneswa kunyangwe pane maapps apo muyero waiwanzodzokera kumashure ku60Hz otomatiki. Uye iko kushanduka kweiyo zororo reti iro vashandisi vari kupomera iko kupenya kwechidzitiro. Mumwe mushandisi akati, 'MuWhatsApp zvinongoenda mabonkers uye switch pakati pe60Hz ne90Hz nguva dzese, zvichikonzera kupenya kwakashata. Mumwe Redditor ane mubato weTinyBirdperson akanyora, 'Ehe, vanoita kunge vanoisa skrini kuna 60hz kana ikasachinja kune mafuremu mashoma, uye pese painoshanduka inokwira kusvika 90hz. Ndichiri kunyora izvi, chinovhara chinovhenekera nguva dzese apo kiyi yacho painowoneka kana kunyangarika. Ndinovimba, ivo & maapos; vachawedzera sarudzo yekudzima iyi asap. '
Vamwe vashandisi vePixel 4 vakaisa yazvino Android 11 beta vari kutambura nekirin'i inopenya inoenderana ne90Hz Smooth yekuratidzira ficha.
Iko kune kwakajairika workaround, asi Pixel 4 uye Pixel 4 XL vashandisi havasi kuzofara nazvo. Nekudzima iyo 'Smooth kuratidza' sarudzo, iyo inodzima inofanira kunyangarika kubva pachiratidziri. Asi izvo zvinoreva kubvisa iyo 90Hz yekuvandudza mwero uye kudzokera kuchikoro chekare 60Hz mwero nguva dzese. Pachiyero chekare, masikirini anozorodza ka90 sekondi imwe neimwe panguva yekumhanya kwekupedzisira, vanogadziridza makumi matanhatu pasekondi yega yega. Inokurumidza zororo mitengo inonunura buttery kutsetseka kupuruzira uye inowedzeredzwa nhare yemitambo mifananidzo.
Iyo Pixel 4 nhepfenyuro inoratidzira iyo 'Smooth inoratidzira' ficha iyo inobvumidza iyo yekukurumidza yekuzorodza mwero kuti igoneswe kunze kwekunge kana yakakwira zororo reti isingakoshe kune iyo mushandisi ruzivo. Izvi zvinoitirwa kuchengetedza hupenyu hwebhatiri iyo, sekuziva kwevazhinji vePixel 4, iri pamutengo. Zvichida Google ichagadzirisa iyi nyaya nekukurumidza nesoftware iri kuuya.
Iwo akanakisa kickstand makesi e iPhone X
T-Mobile & apos; vatengi vakabhadharwa vane mafoni eApple vanowana iyo Refill app yeyore nyore-kumusoro
App inowedzera Google Mubatsiri mashandiro kune yako Samsung Galaxy Watch
Galaxy Cherechedzo 8 haizodzokororazve njodzi yenyaya yeCherechedzo 7, uye heino & nei apos; s nei
Samsung Galaxy S21 yakateedzana ichirasikirwa nekutengeserana-kukosha kwayo seye munhu & bhizinesi reapos: mushumo